Ranveer Singh wuxuu hilmaamay Director Bhansali abaalkii uu u galay mise dhalinyaronimo ayaa qaaday! – Filimside.net
Ranveer Singh wuxuu hilmaamay Director Bhansali abaalkii uu u galay mise dhalinyaronimo ayaa qaaday!
Ranveer Singh haatan wuxuu ka mid yahay atoorayaasha Bollywood-ka ugu awooda badan sidoo kalena xili dahabi ah ayuu bartanka kaga jiraa madaamo sedexdiisa filim ugu dambeeyeen Hit dhameestiran wada noqdeen Padmaavat, Simmba iyo Gully Boy waxaa intaas u dheer noloshiisa gaarka ah wey dhameestirmatay madaama dabyaaqadii sanadka hore uu la aqal galay jaceylkiisa Deepika Padukone.
Balse Ranveer Singh haatan waxaa lagu soo waramayaa inuu u careesan yahay Director Sanjay Leela Bhansali oo horey ugu sameeyay filimada awoodiisa sare usoo qaadeen Ram Leela, Bajirao Mastai iyo Padmaavat wuxuuna kaga carooday in dhawaan u Salman Khan u dhiibtay filimka Inshallah oo ay Alia Bhatt atirisho kowaad ka tahay.
Ranveer wuxuu sugaayay markii 4-aad inuu la shaqeeyo mudane Bhansali sidii ay ku balameen balse mashruuciisa dib ayuu isaga dhigay Bhansali wuxuu ku dhawaaqay filimka weyn Inshallah in Salman iyo Alia u sameenayaan lana daawan doono Eid 2020 waana sababta keentay in Ranveer u caroodo Director Bhansali.
Laakiin qof ka tirsan xafiiska Director Bhansali ayaa arinkan ka hadlay wuxuuna yiri “Waa sax Bhansali iyo Ranveer mar afaraad inay isla shaqeeyaan ayay ku balameen balse filimka Inshallah waa filim sameyntiisa Salman loogu tala galay marka aan sugno mudane Bhansali marka uu la shaqeynta Salman kasoo dhamaado inuu markale Ranveer la shaqeeyo balse haatan 100% waqtigiisa wuxuu galinayaa filimka uu Sallu sameenayo.”
Filim falanqeeye aan rabin in magaciisa la xuso balse la hadlay shabakada Mumbai Mirror ayaa sheegay in Ranveer hilmaamay Director Bhansali abaalkii uu u galay ama dhalinyaronimo ayaa qaadeyso oo aan laga rabin wax umaan ah inuu banaanka usoo dhigo mudanihii garabka weyn siiyay sababna u ah maanta maqaamka uu fanka ku leeyahay.
Waxaa Aqrisay 622